Radius yempembelelo: Iqabane, ukudibana, iMedia kunye noLawulo lweeTag | Martech Zone
Impembelelo iRadius yenza ukuba ii-brand zedijithali kunye neearhente zonyuse i- Ukubuya kwenkcitho yentengiso kuwo onke amajelo edijithali, eselfowuni kunye angaxhunyiwe kwi-intanethi. Itekhnoloji yabo yokuthengisa ye-SaaS yenza ukuba abathengisi babe nesinye kubahlalutyi jonga kuzo zonke iinzame zokuthengisa ngokuqokelela idatha yohambo lwabathengi kunye neendleko zokuthengisa.
Impembelelo yeRadius Suite yeeMveliso ibandakanya
Umphathi weQabane -Zenzekelayo iinkqubo zakho zokubambisana kunye nezobuchule. Ukunciphisa umrhumo wentengiselwano kunye nokunyusa i-ROI ngelixa uphucula isikali, ukuqonda kohlalutyo kunye nolawulo.
Umphathi weTag Ulawulo lwethegi kuwo onke amajelo-kubandakanya iselfowuni.
Umphathi weMidiya -Ihabhu yedatha esembindini yokulungelelanisa ingxelo yamajelo amaninzi kunye nokufumana ukuqonda kwixabiso elinikelwe ngumthombo ngamnye, kunye nokulinganisa ngokuchanekileyo buyela kwintengiso (INDLELA).
Imfonomfono App Tracker Dibanisa i-SDK enye kwaye ulandele ngokuchanekileyo konke ukufakwa kweselfowuni kunye neziganeko zangaphakathi nohlelo ezivela kuwo onke amaqabane.
Umkhondo weTown Tracker Landa umkhondo kuyo yonke imisebenzi yokufowuna engenayo njengokucofa, kwiqonga elinye. Ngokuzenzekelayo ukuhamba komsebenzi, kubandakanya ikhontrakthi yamaqabane kunye neentlawulo.
Indawo yokuThengisa -Fumana kwaye uqhagamshele abapapashi kunye nabapapashi bayo ngokusebenzisa i-algorithm yokukhangela yeRadius.
Ngokuzenzekelayo kweenkqubo zentengiso ezibalulekileyo kunye nokuhanjiswa kwexesha-lokwenyani kwengxelo yokubonwa kokubonakalayo, Impembelelo iRadius Iqhuba ingeniso kwiinkampani zehlabathi ezinje ngeAmerican Airlines, iCabela's, Shutterstock, Tommy Hilfiger kunye neWayfair.
tags: ulawulo lobulunguiqonga lokuthengisaiqonga lobulunguiqonga lokuthengisa arhenteiqonga learhenteukuthengisa umjeloireyithi yempembeleloUmnxeba we-inbound trackerUmphathi weendabaIsoftware yokulandelelaulawulo lweqabaneumphathi weqabanebuyela kwintengisoukugqumaii-saasUlawulo lwethegiUmphathi wethegi
Sep 20, 2016 ngo-11: 40 PM
Sukuthemba eli qonga lokuthengisa libandakanyekayo. Ndathumela umnini wewebhusayithi ukuba athenge isicwangciso eMaxCDN kwaye ndafumana ikhomishini ehlawulwa kwiinyanga ezi-3. Ndizigqibile zonke iifom eziyimfuneko ngeqonga lokuthengisa elibambiseneyo likaMaxCDN kwiMpembelelo yeRadiyo kwiinyanga ezi-3 ngaphambi kokuba intlawulo ifanele. Ndibekele bucala imali yam yokuhlawula amatyala am. Emva kweenyanga ezi-3 xa kufuneka kwenziwe intlawulo, iqela labo lezemali laphakamisa umba wokuba inombolo yam yokuhamba ayisebenzi. Kutheni le nto umba wenombolo yokuhamba ungakhange usonjululwe kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo apho ukulibaziseka ekuhlawuleni bekungathintelwa? Kutheni le nto uphakamise lo mbandela xa ndilindele ukuba imali endiyifumeneyo ihlawule iindleko zam kakubi? Oku ngokucacileyo sisiphene / ukungakhathali kwinxalenye yenkqubo yeRadius yeMpembelelo. Ndineempikiswano zeeveki ezi-2 ngenkxaso yabathengi babo, ndibacebisa ukuba basebenzise iindlela ezahlukeneyo ezaziwayo ukuba zisebenzela iakhawunti yam kwaye kwafika kwinqanaba apho ndadibana neentloko zeMpembelelo yeRadiyo kwaye andizange ndiphendule kubo. Ndaphinda ndanxibelelana ngqo noMaxCDN kunye nentloko yabo ukucela uncedo lwabo kuba sendisele ndizigqibile zonke iinketho endinazo ngeMpembelelo yeRadiyo, sele ndiphelelwe kukuzithemba kubo kwaye ukujongana nabo kundinika uxinzelelo ngakumbi. Andizange ndifumane uncedo kuMaxCDN. Ngayo yonke le mizamo, ndilahle nje ixesha kwaye bendinika uxinzelelo olukhulu. Kwaye ndilahlekelwe yimali ngenxa yezohlwayo zokuhlawulwa kade kwemali yamatyala. Impazamo yam bendibathembile ukuba bazakuhlawula.
Sep 20, 2016 ngo-11: 44 PM
Kubonakala ngathi banokusebenzisa ukuqinisekiswa kokujonga kwinkqubo yabo, kodwa andiqinisekanga ukuba ndiza kuthi ga ngoku ukuba abathembekanga xa ufaka ulwazi olungalunganga lokuhamba. Sisebenze nabo kwaye asibonanga ngxaki inye.